Ngomlindo wakho ... entwasahlobo - isibhakabhaka esibhakabhaka esibhakabhakeni, ilanga elikhanyayo, ukukhwaza kweentaka ezivakalayo kuyinto enomdla kwaye iyavuya. Kwaye kubonakala ngathi kuphela ngengozi umnyaka omtsha ufika ebusika, kwaye kungekhona kule mihla yentsasa, kuba ngoku ufuna ukwenza izifiso! Ngendlela, unako ukuphupha naluphi na umhla okhulelwe ngumntwana, unokuyenza nanoma yimaphi imini. Ukuba ulandela imithetho elula, kuba ibhinqa elizisa ulonwabo-iphupha lomntu!
Yiza kwaye unqobe!
Musa ukumangaliswa, kodwa iphupha lifana nesambatho esithandayo. Okokuqala uvela kunye nokucwangcisa kwayo, ngoko ucinga indlela ehlala ngayo ngokumangalisayo kumntu wakho omncinane, kwaye ekugqibeleni, ngolunye usuku ufumene ingubo efunwayo kwisitolo sakho ozithandayo. Ngoko ngephupha: okokuqala kufuneka kutyalwe, kuboniswe ngeenkcukacha ngokupheleleyo. Ungacingi nje ngokukhawuleza: "Ndifuna ukuba ngowona mhlekazi", "Ndifuna i-ayisikrimu", "Ndifuna usuku lokuthandana," "Ndifuna isandi elitsha" - jolisa kwizinto ezixabisekileyo kwaye ucinge umfanekiso owufunayo. Kwaye kulunge ukwakha i-collages yamaphupha akho - unamathele kwiphepha lephepha lemifanekiso yamaphephancwadi, efana neyona nto ucinga ngayo. Nsuku zonke, mxubushe lo mdwebo, uhlambuluke ngeengcamango ezimangalisayo, ukuzisa iphupha lokuphila - emva koko, iingcamango zizinto eziphathekayo. Akukho xesha lokudala? Chaza nje iphupha kwiphepha-phepha-kodwa ngokuqinisekileyo kwiinkcukacha ezimbala, kwaye qiniseka ukuba uluhlu iimvakalelo eza kuvela xa umnqweno wakho ufezekile.
Oothixokazi abancinci bayazi ngokuqinisekileyo, kungakhathaliseki ukuba ucinga ngendlela efanelekileyo ngayo iphupha lokuba ngumfazi ozisa ulonwabo, umntu akakwazi ukwenza ngaphandle kweenkolelo zakhe. Kuyimfuneko ukuthatha amanyathelo ekukhanukeni komnqweno, kwaye ngendlela efunekayo ukudibanisa izinto ezimnandi kunye luncedo. Oku kubaluleke kakhulu, kuba ngokwemithetho edumileyo yePareto, kuphela i-20% yemizamo inika i-80% yesiphumo. Ukuba uquka ukuzonwabisa kumsebenzi - ukufaneleka kwamaphupha akho kuya kudlula konke okulindelweyo! Ngokomzekelo, iphupha lokuba ngumtsalane ngakumbi kunye nokuzithemba kulula ukuphumeza xa uzingqongileyo kunye neentlobo ezihambelanayo. Phakathi kwabo - ukuxhamla okukhulu kwimihla yokusa, iziqhumiso ezihambelana nekhanda lakho elincinci, izambatho eziphathekayo ezigxininisa umfanekiso obumnandi kunye nemilenze emancinci eya kuba yimbulelo emangalisayo ngokuthintela kakuhle kweVenus. Ngokuqinisekileyo uyayithanda umbala opephu olubomvu lwalo luhlu. Amacandelo akhe amancinci angama-5, azungezwe i-ribbon ye-slip engcono, ayesondeza ngokukhawuleza kwesikhumba sakho, ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza akhuphe iinwele ezongezelelekileyo kwaye enze ngokugqithiseleyo. Kwaye ngenkqubo yokuzisa ulonwabo oluphezulu, sebenzisa i-gel ecocekileyo yelinen I-Satin Care Lavender Kiss "Kiss of lavender." Musa ukukhathazeka malunga nantoni na - vele uvuyo yonke inyathelo kwiphupha lakho lokuba ngumfazi ozisa uvuyo!
Qaphela umgaqo othile olula kumfazi: okokuqala wenza umgudu omncinci, uvelise iphupha lakho ngakumbi, kwaye ngoko uyavuya kakhulu ngenxa yeempumelelo. Kwaye ukuba umsebenzi ophuphayo uphuthumayo, uthathe udlelwane. Njenge-phulori yeoli, kwaye ukuzidumisa akuyi kuphazamisa. Kulo lonke ukunqoba - elikhulu okanye elincinci - ziqhayisa ngesiqhamo sakho uze uziphephe ngezipho. Umhlobiso omnandi okanye indebe yehayi elimnandi kwi-cafe yakho oyintandokazi - ezi zipho ezimnandi kumfazi uya kuzifaka imibala kwiintsuku zakho zasentwasahlobo. Yabelana ngeempumelelo zakho kunye nabahlobo okanye abathandekayo - cwina kwimida yokufudumala kwabo, njengelanga! Ewe, nangaphezulu elangeni, kuba imisebe ekhanyayo inceda umzimba wakho ukuba uzalise ama-hormone enhle. Kwaye ke, ngokoqobo uyangxolisa: "Iphupha, ingaba intliziyo yakho inqwenela kangakanani!"
Iimfihlelo zeArabhu kunye neempendulo zokuhle
Izindlela zokuvakalisa ubuhle
Izindlela ezisisiseko zobungqina beplastiki yobuso
Indlela yokwandisa i-leukocytes egazini
I-Vitamin isiselo "i-Blueberry"
Isibikezelo seenkwenkwezi ngeengqungquthela ze-2010
Impilo Yesibhinqa: Ubomi boTyhini
UTatyana Totmianina kunye no-Alexei Yagudin batshata eKrasnoyarsk, umfanekiso wokuqala
Isaladi kunye ne-rucola kunye neetata
I-Recipe ye "i-muffins ezihlwaya"
Ikhekhe le-chocolate nge-icing creamy
Indlela yokukhetha i-cosmetic efanelekileyo ebusweni?
Imigaqo yentlonipho kunye nembeko kubafundi